Allgedo.com » 2012 » October » 11
Home » Archive Daily October 11th, 2012
Qarax uu ku dhintay qofkii aasayay oo caawa ka dhacay Magaaladda Beledweyne
Wararka ka imaaanaya Magaaladda Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaas caawa uu ka dhacay qarax xooggan oo uu ku dhintay qofkii aasayay. Sida ay dad goobjoogayaal ah usheegeen Warbaahinta AOL Wiil dhalinyaro ah ayaa dhintay kadib markii uu la qarxay Bambo uu ku aasayay meel wado ah. “Wiil dhalinyaro ah ayaa waxyaabaha qarxa ku aasayay meel wado ah waxaana halkaas ku dhintay...
Dagaal mudo socday oo Muqdisho ku dhexmaray ciidamo katirsan dowlada Soomaaliya
Ciidamo kawada tirsan dowlada Soomaaliya ayaa galabta ku dagaalamay meel aan ka dheereyn garoonka diyaaradaha ee Magaaladda Muqdisho. Dagaalkan ayaa waxaa uu ka danbeeyay kadib markii ciidamadan ay lasoo kala safteen dad lasheegay in ay isku haysteen guri Muqdisho kuyaal. Ku dhawaad 2 kamid ah ciidamada dagaalamay ayaa dhintay kuwa kalana dhaawac ayaa kasoo gaaray, iyadoona xaalada ay caadi kusoo laabatay...
Ururka Samafalka CERID oo Gargaar dhinaca hoyga ah gaarsiiyey Barakacayaal ku sugan degmada Luuq ee Gobolka Gedo.
In ka badan ilaa 4, 000 oo qoys oo ka mid ah barakacayaal deggan ilaa 14 xero oo ku yaalla gudaha iyo daafaha degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa markii ugu horeysay mudo Sanad ka badan ayaa waxaa loo qeybiyey Gargaar dhinaca hoyga oo isugu jira Bustayaal, Baco, Maacuunta Raashinka lagu karsado iyo alaabo kale, iyadoo deeeqdaasina oo ahayd Gargaar ay ku deeqeen Qaar ka mid ah Hay’adaha Samafalka...
Shirkii Golaha Wasiirada maanta oo Looga Hadlay Arimo Muhiim ah.
Muqdisho, Somalia (AOL) – Shir ay maanta isugu yimaadeen Golaha Wasiiradda oo uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin guulihii ay gaareen Ciidanka Qaranka, warbixino laga dhagaystay Gudigii Gurmadka ee daadadkii ka dhacay Baladweyn, iyo sidii wasiiradu isugu diyaarin lahaayeen inay sameeyaan...
Mudaharaad lagaga soo horjeedo cunista Qaadka oo dhawaan ka dhici doona magaalada London ee dalka Ingiriiska (Daawo Video)
London, England (AOL) – Magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa waxaa Qamiis, November 2012 lagu qaban doonaa mudaharaad aad u balaaran oo looga soo horjeedo cunista iyo ka ganacsiga maan dooriyaha Qaadka. Qaadka oo haba yaraatee aanay jirin wax faa’iido ah oo laga helo ayaa waxay in badan oo Soomaali ah har iyo habeyn ku mashuulsan yihiin cunistiisa, taasoo aakhirkiina qofka laasinta...
Saraakiisha Ciidamada Dowladda Federaalka ee ku sugan Gobolka J/Hoose oo ugu baaqey Xukuumada Cusub ee la dhisi doona in ay wax ka qabtaan nidaam xumida ka dhex jirta Ciidamada.
Qaar ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Dowladda Federaalka ee ku sugan Gobolka J/Hoose ayaa waxay sheegeen in xilligan Deegaanadii ay la wareegeen Ciidamada Dowlada, kuwa Raaskambooni iyo Amisom in ay tahay mid degan, isla markaana dadka deegaanku ay baahi weyn u qabaan sidii loogu sameyn lahaa Maamul loo dhan yahay oo wax ka qabta amaanka iyo Horomorka Bulshada. Col. Cabdulaahi Cabdow Giije oo ka mid...
Kenya waa in ay ciidamadeeda kala baxdaa dalka Soomaaliya.
Ku: Madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud Ku: Ra’isal wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdi Faarax Shirdoon Ku: Gudoomiyaha Baarlamaanka Dr. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari Ku: Odoyaasha Dhaqanka, Waxgaradka Iyo Aqoonyahanada Soomaaliyeed Ku: Madaxda ururka IGAD iyo Saraakiisha Sare Ee Ciidamada AMISOM Waxaan u hambalyenayaa dhamaan Ummada Soomaaliyeed maadaama ay heleen Madaxweeyne,...
Saraakiisha Dowladda ee Jubooyinka iyo Gedo oo Sheegay in ay Socdaan Qorsheyaal Dagaal oo ka Dhan ah Al-shabaab
Saraakiisha hogaamineysa howlgalada ciidamada dowladda Soomaaliya ee Jubooyinka iyo Gedo ayaa sheegay in ay socdaan qorsheyaal lagu doonayo in xoogagga Al-shabaab looga saaro degmooyinka ay weli gacanta ku hayaan ee gobollada Jubooyinka iyo Gedo. Col. Ismaaciil Sheekh Cabdi (Koofi) oo ka mid ah saraakiisha hogaamineysa ciidamada dowladda ee gobolada Jubooyinka iyo Gedo oo warbaahinta la hadlay ayaa...
Kenya oo sheegtay in askar badan iyo diyaarado dagaal ay ku waayeen qabashadii Kismaayo
Dowlada dalka Kenya ayaa faah faahin ka bixisay qasaraaha kasoo gaaray howlgalkii ay ciidamadooda iyo kuwa dowlada Soomaaliya ay kula wareegeen Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Isagoo lahadlayay saxaafada ayaa Yuusuf Xaaji Wasiirka gaashaandhiga Kenya waxaa uu sheegay in ciidamo badan ay kaga dhinteen dagaalka Soomaaliya. Waxaa uu sheegay in Soomaaliya ay udireen ciidamo gaaraya 3 kun...
Al-Shabaab oo Gudoomiye cusub umagacaabay gobolka Galgaduud
Kooxda Shabaab ee ka dagalanta gudaha dalka ayaa gudoomiye cusub umagacowday gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa gudoomiyaha gobolka Galgaduu umagacaabay Sh Xasan Yacquub cali oo kamid ahaa Saraakiishii Shabaab ee gobolka Jubada Hoose kaas oo dhawaan galay gacanta ciidamada dowlada iyo kuwa Amisom. Sh Xasan Yacquub ayaa saxaafada Afka Shabaab ku hadasha ushegay in gobolkaas uu...